सुरक्षात्मक कवचमा बढदैछ दरार, दुई टुक्रा हुन सक्छ पृथ्वी ! -सुरक्षात्मक कवचमा बढदैछ दरार, दुई टुक्रा हुन सक्छ पृथ्वी ! -
सुरक्षात्मक कवचमा बढदैछ दरार, दुई टुक्रा हुन सक्छ पृथ्वी !
३ भाद्र २०७७, बुधबार १७:५१ मा प्रकाशित
एजेन्सी । एक समाचार जुन सम्पूर्ण विश्वको लागि चिन्ताको विषय हुन सक्दछ। वास्तवमा, सूर्यको घातक किरणहरूबाट हामीलाई जोगाउने हाम्रो पृथ्वीको सुरक्षात्मक कवचमा दराराहरू दिन प्रतिदिन बढ्दैछ। यदि हामी समयमै ख्याल दिदैनौं भने, त्यो दिन टाढा छैन जब पृथ्वीको सुरक्षात्मक कवच (चुम्बकीय क्षेत्र) यस क्र्याकको कारण दुई टुक्रा टुक्रा हुन सक्छ।
अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले यो पुष्टि गरेको छ। नासाका अनुसार यो कवच निरन्तर कमजोर हुँदै गइरहेको छ। यो कवच दक्षिण अमेरिका र दक्षिण अटलांटिक समुद्र बीच कमजोर हुँदैछ। खगोलविद्हरूले यस प्रक्रियालाई दक्षिण अटलांटिक विसंगति भन्ने शेलमा भंग भनेर संकेत गरेका छन्।
दराराहरू २०० बर्षमा बन्यो
वैज्ञानिकहरूका अनुसार चुम्बकीय क्षेत्रमा भएको दरारका कारण यो हुँदै छ । यो कमजोर चुम्बकीय क्षेत्र पृथ्वीको उत्तरी भागदेखि सम्पूर्ण आर्कटिकमा फैलिएको छ। मेमा, यूरोपियन स्पेस एजेन्सीले रिपोर्ट गरेको छ कि चुम्बकीय क्षेत्रले गत २०० वर्षमा यसको औसत क्षमताको ९ प्रतिशत गुमाएको छ।
१९७० देखि, कवचमा क्षतिको प्रक्रिया तीव्र र ८ प्रतिशतले कमजोर भयो। यद्यपि आर्मरको दुई टुक्रामा विभाजन प्रमाणित गर्न सकिदैन।
सेटेलाइट मिसनहरूले घर खतरा, प्रोटोन कण बिग्रने डर
वैज्ञानिकहरूका अनुसार पृथ्वीमा भइरहेको यस गडबडीले पृथ्वीको सतहमा असर गरिरहेको छ। विशेष गरी पृथ्वीको नजिकको वातावरणमा यसले गहन प्रभाव पार्नेछ, जुन भूउपग्रह मिशनहरूको घर हो। भनिन्छ कि यदि यो भयो भने, संसारभरका उपग्रह मिशनहरूले अर्को ठूलो चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ।
वास्तवमा, जब कुनै उपग्रह यी प्रभावित क्षेत्रहरुबाट जान्छ, यो सूर्यबाट निस्केको उच्च उर्जा प्रोटोन कणहरुको एक स्नान सामना गर्न सक्छ। त्यो पनि जब त्यस क्षेत्रको चुम्बकीय क्षेत्रले यसको शक्तिको पूर्ण उपयोग गर्न असक्षम हुन्छ। यस्तो अवस्थामा, उपग्रहको कम्प्युटर बिग्रिएको वा पूर्ण रूपमा बिग्रेको हुन सक्छ।
अन्तरिक्ष एजेन्सीहरूले विशेष जुगाडबाट उपग्रह बचत गर्दछ
नासाका अनुसार अधिकांश अन्तरिक्ष एजेन्सीहरूले उनीहरूको उपग्रहलाई सुरक्षित राख्न विशेष जुगाड प्रयोग गरिरहेका छन्। जब उपग्रहहरू कमजोर चुम्बकीय क्षेत्रहरू भएको क्षेत्रबाट भएर जान्छन्, तिनीहरूले आफ्नो उपग्रहहरूको शक्ति घटाउँदछन्। त्यसो गरेर, तिनीहरूले सूर्यको नाश हुने विकिरणबाट उनीहरूको उपग्रहहरूलाई रक्षा गर्न सक्दछन्।
विज्ञान प्रविधिको अध्ययन अनुसन्धानमा जोड
अमेरिकाले चिनियाँ एप टिकटक र विच्याट माथी लगाइयो प्रतिबन्ध
Flying Snake : पखेटा नभए पनि कसरी उड्छन सर्प ? वैज्ञानिकहरूले लगाए पत्ता
सुदूरपश्चिमका नौ वटै जिल्लामा फोर जी इन्टरनेट सेवा विस्तार